Manaova fanapahan-kevitra hentitra hiverina amin’Andriamanitra - Lalamasaka Hatry ny Ela
Accueil - Manaova fanapahan-kevitra hentitra hiverina amin’Andriamanitra
par Administrator · Publié 29 mars 2020 · Mis à jour 30 mars 2020
Tsy mahavita mivavaka intsony ianao, feno vovoka ny Baibolinao satria efa am-bolana maromaro izao no tsy niditra am-piangonana intsony ianao. Avelanao hanapaka eo amin’ny fiainanao ny fisalasalana, ny fanamelohan-tena, ary tsy manana fahasahiana intsony ny hitady ny tavan’Andriamanitra ianao.
Ao anaty lalina ao anefa dia mbola mahatsapa ihany ianao fa tsy maty tanteraka ny afon’ny Fanahy Masina ; henonao ihany fa mbola mirehitra kely ho an’ny Tompo ianao ary toa tsy tena nafoin’Andriamanitra tanteraka.
Fotoana izao hanovàna ny zavatra rehetra. Tokony hanao an-terisetra mihitsy ianao hamarana tanteraka izany tarazo ratsy an-davanandro izany. Efa naharitra ela loatra no nandosiranao ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny fiainanao ; efa ela loatra no niviliananao tamin’ny lalana mahitsy ka nandaozanao ny fanamasinan-tena ! Miantso anao Andriamanitra anio hiverina Aminy. Ianao ihany no afaka mandray izany fanapahan-kevitra izany. Tsy hisy olona afaka hanery anao, fa ianao no tsy maintsy miteny hoe « Aoka izay, faranako eto indray mandeha tsy miverina izao lalan-dratsy izao »
Article suivant Avereno indray ny fifandraisanao amin’Andriamanitra
Article précédent Fampakaram-badin’ny Zanak’Ondry BroDaoud April 1 1963